सर्वेन्द्र खनाल आजकै दिन देखि एमाले ! – GALAXY
सर्वेन्द्र खनाल आजकै दिन देखि एमाले !
७ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल एमाले बनेका छन् । उनले नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने पक्का भएकोहो ।एमाले नेतृत्वसँग पार्टी प्रवेश गर्ने सहमति भइसकेको स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङले बताए । ‘प्रवेश कार्यक्रम चाँडै हुन्छ । पार्टी प्रवेश गर्न तयार भइसक्नुभएको छ,’ गुरुङले भने ।
उनका अनुसार ९ कात्तिकको पालिका अधिवेशनपछि खनाललाई स्वागत गरिनेछ । ९ कात्तिकमा एमालेले ७५३ वटै स्थानीय तहमा अधिवेशन गर्दैछ ।यस्तै यता बीएण्डसी अस्पताल, झापाका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं नेकपा एमाले प्रवेश गरेका छन् ।
आइतबार झापामा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रसाईंलगायतलाई पार्टी प्रवेश गराएका हुन् । एमाले केन्द्रीय सदस्य रवीन कोइराला भन्छन्, ‘उहाँलाई के हैसियत दिने भन्ने पछि छलफल होला, अहिले पार्टी प्रवेश गर्नुभएको छ ।’
आइतबार पार्टी प्रवेश गरेका प्रसाईं असोज १५–१७ सम्म ललितपुरको गोदावरीमा भएको प्रथम विधान महाधिवेशनमा नै सहभागी भएका थिए । उनी एमाले केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा विधान सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रसाईंले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको चर्को आलोचना गरे ।
लिखित सम्बोधन गरेका उनले प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई कम्युनिस्ट भन्न लाज लाग्नुपर्ने बताए । उनले प्रचण्ड र बाबुरामको नाम लिँदै ‘हामीले यही दिन देख्न मृत्युवरण गरेका हौं रु’ भनी प्रश्न गर्दा सहभागीहरुले हुटिङ गर्दै ‘होइन’ भनेका थिए ।उनीपछि सम्बोधन गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि प्रसाईंकै अभिव्यक्तिलाई समर्थन जनाउँदै प्रचण्डको पछि लागेर काम नहुने पनि बताए ।
प्रसाईं लामो समयसम्म प्रचण्डनिकट मानिन्थे । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुनुपूर्व प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै निवासमा भेट गराएर मार्सी चामलको भात खुवाएको तस्वीर सार्वजनिक भएपछि प्रसाईं चर्चामा आएका थिए ।तर २३ फागुन २०७७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि प्रसाईं एमालेतिर लागेका छन् ।